Ngabe 'uHacker' usho ngempela | KusukaLinux | I-ChrisADR | Kusuka kuLinux
UChrisADR | | Okunye
Ngibonga uGuillermo ngokusikisela isihloko salokhu okuthunyelwe, kuyinto okuthi noma nginenhlanhla yokuphila, angazi noma ngabe kubhalwe ngayo lapha esikhathini esedlule, kodwa noma kunjalo ngizokuveza futhi ukwabelana kancane nawe 🙂
1 Ubuciko bokuba yisigebenga
1.1 Ingqikithi yomgengezi
1.2 Abaduni bokuqala
2 Umphakathi wokusekelwa
2.1 Lolu lwazi lubavumela ukuthi bathole ukukhubazeka
3 Kubaduni izigebengu akuzona neze izigebengu
3.1 Izisusa zobugenge
3.2 3 izinhlobo hacker namuhla
4 Abaduni benza lo mhlaba ongcono
5 Ukucabanga kokugcina
Ubuciko bokuba yisigebenga
Enye yezincwadi eye yangidonsela amehlo kakhulu ngale ndaba ngaphandle kokungabaza Ukugenca: Ubuciko Bokusizakala, de UJon erickson. Kuyigugu kunoma ngubani ofuna ukuzicwilisa kulo mhlaba we iqiniso kubaduni. Futhi njengoba kunjalo encwadini, ngizozivumela ukuthi ngithathe umbuzo wokuqala owaqhuma ingqondo yami lapho ngiyifunda.
Usebenzisa ngayinye yezinombolo u-1,3,4 no-6 ngqo kanye nganoma yikuphi ukwenziwa okuyisisekelo (engeza, khipha, phindaphinda, hlukanisa) thola ingqikithi yama-24 kanye nje futhi i-oda likuwe. Ngokwesibonelo:
Ilungile ku-syntax, kepha ayilungile kumphumela.
Kumelwe ngivume ukuthi angikwazanga ukuxazulula inkinga ngize ngiqede ukufunda incwadi futhi ngabona isixazululo ekhasini lokugcina. Kepha ngokuyisisekelo lokhu kungumqondo we-hacker, ukwazi ukubona lokho abanye abangakuboni.
Iqembu labafundi abavela eMIT (Massachusetts Institute of Technology), ngawo-50, lathola umnikelo wezinsiza zocingo, ngalezi zingcezu, basungula uhlelo olwalubavumela ukuthi baphathe ulayini wezokuxhumana bakude ngezingcingo ezikhethekile. Benza ukutholwa besebenzisa ubuchwepheshe obusivele bukhona, kepha babusebenzisa ngezindlela ababambalwa noma ababengakaze babubone ngaphambili. Laba kwakungabaduni bokuqala bokuqala.
Namuhla kunezivivinyo eziningi "zokunikwa isitifiketi" zokuba "yi-hacker," kodwa iqiniso ukuthi umuntu ngeke abe yisigebengu sangempela kuze kube yilapho ilungu lomphakathi esivele liyi-hacker livuma ukusibiza ngaleyo ndlela yokuhlunga. Enye yezindlela zokwenza lokhu ukukwazi ukunikela ngokuthile okuwusizo emphakathini. Abaduni abaningi ekugcineni izinhlelo ezisezingeni eliphansi, njengoba bazi ngokujula ukuthi amakhompyutha asebenza kanjani, ezingeni lememori nokusebenza kwesistimu; bits njengesinqumo sokugcina.
Lolu lwazi lubavumela ukuthi bathole ukukhubazeka
Lokhu kufana nesikhathi siqala ukufunda izibalo, ngenkathi siseyizingane, sasidinga umuntu ozosichaza futhi asifundise izimpawu nezimo, futhi lokhu kwenzeka ngendlela ethile nabahleli bohlelo, isigebenga sangempela umuntu ozaziyo lezi zimpawu nomumo, futhi iyasikhombisa uma ibona ukuthi sehlulekile ukuwasebenzisa (ukuba sengozini). Futhi njengoLinus Torvalds uqobo (omunye umgulumbeli omkhulu, ngomqondo wangempela wegama) "ukuba sengozini" kuphela izimbungulu. Ngalokhu kubhekiswa eqinisweni lokuthi akukho okunye ngaphandle kwamaphutha wokuhlela, yize mhlawumbe enezinye izinhlobo zemiphumela ku izimbungulu ejwayelekile kakhulu
Kubaduni izigebengu akuzona neze izigebengu
Lokhu kuyiqiniso kuze kube seqophelweni, ake sicabange ngakho okwesikhashana. Lapho isigebengu seqiniso sifuna ukwazi okuthile, sivivinya noma imininingwana emincane kakhulu yohlelo, ngalo lonke ulwazi lwalo singakwazi ukuvika, noma sigweme izilawuli zokufinyelela, noma siguqule ama-oda wokwenza eminye imisebenzi, noma siguqule uhlelo lube ngenye into. Kepha kuvelaphi lokhu?
Lokhu kungangena ezinhlobonhlobo zamathuba, abanye (iningi labaduni beqiniso) bathola abakutholayo ngenjabulo yengqondo nje, bajabulela inselelo yokuthola lezi 'zikhala'. Abanye bakwenza ngokuzazisa, ngoba bafuna ukwazi ukusho ukuthi bangcono kunabo bonke entweni ethile. Kepha akunakuphikwa ukuthi ezinye noma eziningi zazo zizophinde zibe khona ngemali, ngoba ukulawula izinto ezingalawuleki kubantu abaningi ngokuqinisekile kuyithuluzi elingaveza imali eningi. Lesi yisizathu sokuthi singasho ukuthi abaduni cha Kubi impela, kepha umqaphele empeleni.
Esinye isizathu esibalulekile ukuthi kubaduni buyisa abazethembi kobuchwepheshe esisisebenzisa sonke. Lokhu kungenxa yokuthi olwazini lwabo olujulile lwezinhlelo, bayakwazi ukulinganiselwa nezikhala noma ubungozi. Lolu lwazi ekugcineni lubavumela ukuthi "badlule" ezinhlelweni ukuze bafeze ezinye izisusa zabo (ubuhlakani, ezomnotho, njll.).
3 izinhlobo hacker namuhla
Namuhla singathola amaqembu ama-3 aziwayo abaduni, ahlukaniswe ngendlela yokufuna ukwazi ngohlobo lwesigqoko abasigqokayo: emhlophe, emnyama y isigqoko esimpunga. Kafushane futhi ngesifaniso esesike sakuthinta phambilini, sithola ukuthi abamhlophe yibona bantu abahle, abamnyama ababi, futhi izimpunga ziphakathi lapho basebenzisa khona amakhono abo ukuthi abe mahle noma mabi, kuya ngesimo . Kepha kukhona igama elilodwa lokugcina, elisetshenziswa kakhulu kwimibuthano yabaduni. kwangempela.
Yini i-script-kiddie? Njengoba igama lakhe lisho, "uyingane" emehlweni eqiniso kubaduni esebenzisa imibhalo kuphela ukuzuzisa wena. Futhi lapha kufanele wenze umehluko omkhulu kakhulu,
Ukuqinisekiswa ekuphepheni kwamakhompyutha AKUKWENZISI ukuthi ube yisigebengu.
Futhi lokhu kungumbono womuntu siqu, kanye ne- hacker ungahle ungabi nezitifiketi futhi ube yi-hacker enkulu. Kepha ake sibone ukuthi kungani ngisho lokhu. Izivivinyo / izifundo eziningi zezitifiketi zikufundisa izinyathelo ze- pentesting baphumelele, bakufundisa umbono wezinhlobo zokuba sengozini, bakwethula emhlabeni wezokuphepha kwamakhompiyutha kube sengathi ubazi kahle le ndaba. Kepha iqiniso ukuthi uze wenze umnikelo omkhulu emphakathini hacker, lokhu kusho, kuze kube cha dala ithuluzi que kuzuzisa kubaduni, awuyedwa. Kulula futhi kulula.
Akunandaba ukuthi ungasebenzisa kahle kangakanani i-nmap, noma i-zen, noma i-metasploit, inqobo nje uma ungakwazi ukunikeza ukuxhashazwa kwangempela, noma ithuluzi langempela le-recon, awuyena umgqekezi, uyisikidi-kiddie, futhi akunandaba ukuthi unezitifiketi ze-N kwezokuphepha, lokho ngeke kukushintshe.
Abaduni benza lo mhlaba ongcono
Kungenxa yabo ukuthi sinobuchwepheshe bokuhamba njalo. I-kernel iyisibonelo esihle salokhu, kunamakhulu ezingqondo ezazi kahle le ndaba, ngubani dala ikhodi engasebenzeli umphakathi we-hacker kuphela, kepha umhlaba wonke. Kepha hhayi lokhu kuphela, ukube bekungengenxa yabo, ubuchwepheshe buzoma ezindaweni lapho abantu bengeke bafune ukuqhubeka nokuthuthuka, lokhu ngoba ngokuthola ubuthakathaka, abaduni basiza ukukhuthaza abathuthukisi ukuthi babhale ikhodi engcono, bese kuthi le khodi engcono ishukumise kubaduni ukufakazela ukuthi zingcono nakakhulu, kwakha umbuthano omuhle phakathi.
Hhayi-ke, ngizosika, kanjalo nje, ngoba ngibonile ukuthi ngiyasabalala futhi yize ngingathanda ukuchaza kancane mayelana nokuthi ungakuthola kanjani ukuxhashazwa, lokho kuzofanele kube kwesinye isikhathi. Mina ngokwami ​​ngisazibheka 'njenge-script-kiddie', ngoba yize ngithole ubuthakathaka obuncane laphaya futhi ngikwazile nokubabela ama-CVEs, angikazidaleli ukusebenzisa kwami ​​noma ithuluzi lokwenza kutholakale emphakathini, kodwa ngiyethemba ukuthi izinguquko zesikhashana 😉 Ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, imikhonzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Kusho ukuthini ukuthi 'hacker'
Akungabazeki ukuthi awuyona i-blogger ejwayelekile, wazi ngokujulile ukuthi ukhuluma ngani.
Ngiyethemba uba yiHacker enkulu, kepha ungayeki ukuhlanganyela lokhu okuthunyelwe okuhle.
Ngiyabonga kakhulu uMart ngokuphawula kwakho okuhle 🙂 ngoba lowo ngumqondo, ukwakha umhlaba ongcono futhi ophephile. Ngifuna ukubhala okuncane mayelana nokuthi ukuxhaphaza kusebenza kanjani ngempela, kepha nginenkinga eyodwa noma ezimbili nge-Shutter yami, ngizobona ukuthi ngizokulungisa kanjani kungekudala soon imikhonzo
UJuan Jose Muñoz Ortega kusho
Isigebengu asisona isigebengu, siyaluthanda ulwazi, ngumuntu othokozela futhi othokozela ukubona ikhodi ikuqaqa futhi azi ukuthi isebenza kanjani selokhu ngaba sezweni lamakhompiyutha kusukela ngangiwunjiniyela bengilokhu ngifuna ukwazi futhi ngiyabonga ku-intanethi manje senginokufinyelela okwengeziwe kulwazi ebengingaluthola kuphela lapho ngiqala ezincwadini ukunikela okuhle kakhulu
Phendula uJuan Jose Muñoz Ortega
Uqinisile uJuan José,
Ngingajabula ngokumangalisayo ukukwazi ukuzinikela ekucwaningeni ngokuzayo, kuyadabukisa ukuthi le nsimu ayithuthuki kangako ePeru, kodwa ngenhlanhla encane ngizothola okufanayo lapho ngiqeda izifundo zami ngonyaka ozayo 🙂
UMike MM kusho
Ungangisiza ukufaka i-Subterfuge ???
Phendula uMike MM
Angikaze ngibe nethuba lokuyihlola, ngiya kancane kakhulu kukhodi kunokuhambisa, angikangeni kuleyo nsimu. Kepha kulokhu engikwazile ukuphenya kuye kwaba nezinkinga ezimbalwa ngokufuduka kusuka ku-python2 kuya ku-python3, indlela enhle yokuzijwayeza kungaba ukufunda iskripthi sokufaka bese ubona ukuthi yini okungase kwehluleke, maqondana 🙂
lolu lwazi lungaphezulu kokufana nalolo oluvela kwi-cisco security-essential ... Angisazi ukuthi ngubani umbhali wangempela walesi sitatimende ..!
Unganginika imininingwane ethe xaxa? Angiqiniseki ukuthi yiluphi ulwazi 🙂 kepha ngokuqinisekile kunencazelo engaphezu kwengqondo.
Kulezi zinsuku, ukuba yisigebenga kusho ukuba ngusaziwayo onodumo nemali eningi, ukuzikhangisa nokuzikhangisa ezinkundleni zokuxhumana, ukuziveza obala ku-Intanethi, ukuzenzela ulwazi ngokuncisha amalungelo avikela inkululeko yakho nokusebenzisa amapulatifomu nezinhlelo akuyona ikhodi engu-100%. mahhala. Uma behlangabezana nalezi zici, bangase babe ngabaduni, noma kungenjalo babonwa njengezigebengu zokuvikela nokuvikela ubumfihlo babo.
Kimina igama elithi "uHacker" laba yinto engabekezeleleki, ngincamela igama elithi pentester noma ngithanda ukuphepha kwekhompyutha.
Maqondana nalokho okuphawulayo ngokunikela emphakathini, noma ngabe kungomunye umbuzo we-ego noma nje i-morfag ejwayelekile yokuzama ukuthola idumela elihle, nginabangane abahle abangakaze babelane ngobuthakathaka babo noma amathuluzi abo abawenzayo futhi engingasho ngawo Kuqinisekile kakhulu ukuthi bangabanye babaduni abangcono kakhulu engibaziyo.
Ngakolunye uhlangothi, akunandaba ukuthi ushicilela ikhithi yamathuluzi enhle ukuxhaphaza noma yikuphi ukubekeka engcupheni, uma ungaziwa, kungenzeka ukuthi izophinde ihlanganiswe futhi ishicilelwe iqembu elikhulu, icala lesithangami seZZAZZ kanye i-SDBS yayo eyigugu yokuthi yize aziwa kahle, lokhu kuhlanjululwe phakathi kwe-Metasploit, i-Nmap naphakathi kwamanye amathuluzi futhi nokungaziwa, ababhali abanikwanga ukuqashelwa, i-alias nje, okungaxakwa ngisho ne-lammer ku-akhawunti yabo «ukugenca ku-Facebook ".
Ngokwami, ngincamela ukushicilela "okutholakele" kwami ​​kuphela uma kungenzeka kube nenqwaba yesiphazamisi, ̶q̶u̶e̶ ̶p̶a̶g̶u ̶ kuyabonakala ukuzishicilela ngekhodi ebhalwe kabi, ukuthi yize isebenza kahle, njengoba ngiziqonda kuphela, yimi ngedwa okwenza ukuthi isebenze kahle.
Igama elithi "Hacker" selivele ligugile kahle.
Ngiyavuma. Umphakathi awukho noma awusizi ngalutho njengoba kushiwo, noma njengoba wawunjalo ekuqaleni kweminyaka yama-90.
Namuhla isoftware yamahhala ayiqhutshwa ngumphakathi, iqhutshwa yizinkampani ezinkulu. Ngemuva kwawo wonke amaphrojekthi wesoftware yamahhala kukhona iRed Hat, bekukhona uNovell, le Microsoft, le IBM, le Oracle, noma le nhlangano ebasebenzela njengenzuzo, hhayi ngoba befuna ukwabelana ngamahora abo okusebenza.
Ngaphezu kwalokho, isoftware ishintshe kakhulu, iqiniso le-IT lishintshe kakhulu, kule misebenzi cishe akunakwenzeka ukuthi ngihlale esihlalweni sendlu yami, futhi noma ngabe ingakanani i-C, kungaba ngosayizi Ubulukhuni besoftware efana ne-CloudStack, i-KVM noma i-PostgreSQL, angikwazi ukwenza okungaphezu kokucabanga ngayo futhi ngiyitadishe, ikude nokuyiguqula kusuka phezulu kuye phansi nokuyiguqula ibe ngu-100% kwisidingo sami esithile.
Izikhathi lapho i-software yamahhala emuje yanikezwa ngumqambi endlini yakhe yaphela eminyakeni engaphezu kwengu-20 eyedlule, ngenxa yalokhu, mingaki iminyaka silinde uHurd ukuthi akhiphe uhlobo oluzinzile nolusebenzisekayo? Noma kuthathe isikhathi esingakanani ukubona i-debian edumile ngaphandle kwe-systemd, futhi isetshenziswa kabanzi kangakanani ngempela?
Ukuphela kwento ecishe yathuthukiswa ngokuphelele ngumphakathi ezinye zezindawo ezinemifanekiso, njenge-KDE, noma amathuluzi alula afana nomyalo othile, noma into esoteric evela esigungwini engenziwa ngaphandle kwenkinga emvelweni ocacile, kepha 99,99, 13% womsebenzisi we-linux okhokhelwayo akanayo intshisekelo. Ngibe ngumsebenzisi we-Linux cishe iminyaka eyi-5, kepha sekuyiminyaka engu-XNUMX ngiyeke ukubhekana nokuba ne-linux ku-terminal yami, kuthinta kakhulu umkhiqizo. Ngincamela ukungachithi leso sikhathi, ngisebenzise iWindows noma iMac bese ngisebenzisa leso sikhathi esilahlekile emsebenzini wami
Kwenzeka okufanayo kubaduni. Leyo aura eyindida ezungeze abaduni isiphelile, nokuthi "abaduni ababi" kungamanga. Iningi labo likwenzela imali, alikwenzi ngenhloso yokuphana ngokuthola amaphutha nokusiza umhlaba, futhi abakwenzeli ukuzilibazisa. Uma behola ukuze bathole ukuba sengozini kohlelo lwangaphakathi, noma ukwenza inhlekisa enkampanini esincintisana nayo, bazokwenza ngaphandle kokucwayiza. Lokho kobuhle nokuhlonipheka nakho kuphele ngama-90s.
Sawubona Gonzalo, ngiyabonga ngokwabelana
Ngiyaqonda ngezinga elithile ukungaphatheki kahle kwakho nomphakathi, ukuqala ngoba lapha eLatin America, kucishe kungabikho (uma kuqhathaniswa nezinye izindawo kunjalo). Kepha ngithanda ukugqamisa izingqinamba ezimbalwa. Okokuqala, yize namuhla izinkampani eziningi zibheke emthonjeni ovulekile (hhayi isoftware yamahhala) lokhu akusho ukuthi banesitsha sesiliva kukhodi yabo noma yini efana naleyo ... okungenani kusukela ekubukeni kwe-kernel naku-git I ngikwazile ukubona ukuthi noma ngabe inkampani yakho inkulu kangakanani, uma ikhodi ekhiqizwayo ingalungile, ayifaki ... elula kanjalo. Futhi uma sicabanga ngakho kancane, lezi zinkampani ngeke zingene kanjani uma ikhodi isezingeni, futhi yakhelwe yimiphakathi ngesikhathi nangokuzinikela. Futhi ngoba bayayithanda le ndaba, futhi sebengongoti ngokuhamba kwesikhathi. Okubuye kusiholele ekutheni izinkampani ezihamba phambili ngasikhathi sinye ziqasha ongoti abaphambili, ukuze zisebenze zenze lokho ezikuthandayo.
Futhi kuyiqiniso, inani lekhodi ekhiqizwe namuhla likhulu kakhulu kangangokuba umuntu ubengakwazi ukubhala konke kusuka ekuqaleni ... kepha ukukhuluma iqiniso, ngisho nokuba yi-C guru kunabo bonke emhlabeni bekungaba nesibindi sokubhala okuthile ngokuphelele ekuqaleni: okokuqala ngoba bengingeke ngibe nempilo eyenele ukulingana nekhwalithi yalowo omunye umsebenzi, okwesibili ngoba kuzofanele ngibe ne-inflated ego ukuze ngikholelwe kangcono kunabo bonke labo bangqondo abakhaliphile nabo abazinikele ekwenzeni ikhodi esezingeni eliphakeme futhi bayihlole futhi bayihlole nokususa iphutha. Futhi uma ufuna ukufaka isidingo esithile, ngikholwa ukuthi bengingazi iphrojekthi yamahhala noma evulekile ekuphika isinyathelo ... kunjalo, uma ubhala ikhodi engalungile noma ufuna ukufaka izinguquko ezinqala ngokuphelele ezingaphula izinto eziningi ngaphambi kokuwangeza ... kusobala ukuthi lolu Shintsho ngeke "luqhubeke", kepha yilelo khwalithi ezigabeni zokuqala ezibenze baba bakhulu kwasekuqaleni ...
Uma usuvele uyeke ukusebenzisa i-Linux iminyaka engu-5, lapho-ke akufanele uzicabange ulula. Lokho okubiza ngokuthi "isikhathi esilahlekile", bengizosibiza ngokuthi "umsebenzisi olahlekile", kepha ukwenza isibonelo, ukube bengingumphathi ku-C futhi ngithanda iGNU Linux noma iyiphi iphrojekthi, esikhundleni sokulinda abanye bangenzele umsebenzi , Ngangiqala ukungeza leyo migqa engifuna ukuyibona kakhulu ohlelweni lwami ukuze "isebenze" kahle. Futhi ngiyazi abantu abaningana abasebenza isikhathi sabo "samahhala" ukwenza lezi zinhlelo zibe ngcono, bazinakekele futhi baziphenye ... kodwa ngicabanga ukuthi lokho sekungokwalowo nalowo 🙂
Futhi ngokuqondene nabaduni ababi, siqala ngokucabanga okufanayo, ukuthi abaduni bazinikele ekutholeni ubuthakathaka ... ukube bekungekhona kubaduni abanjengoKen Thompson, uDennis Ritchie, uRichard Stallman, uLinus Torvalds, u-Edwin Catmull .. Uhlu lungaqhubeka luqhubeke, kepha uma ungazi noma yiliphi lalawo magama, kungenxa yokuthi awuqondisisisi kahle ukuthi yini isigebengu ngokuyinhloko ... bavele banamathele "kumbono ongafani nowodwa" abawenzayo ' Ngithanda kakhulu ... Futhi uma ucabanga ukuthi izicukuthwane seziphelile eminyakeni yama-90, ngiyaxolisa ukuthi zikushaye kanzima empilweni, kodwa ake ngikutshele ukuthi basekhona abantu abasebenzela ukwenza lo mhlaba ube mncane kubi kakhulu, esikhundleni sokugwema umsebenzi nokuya ekuphumeni okugwema «ukuchitha leso sikhathi» ...
Ozithobayo futhi ngiyabonga ngokuphawula,
Sawubona Kra, ngiyabonga ngokwabelana, ngiyaluqonda umbono wakho futhi bengifuna nje ukunikeza imibono embalwa kulokhu. I-Pentester ne-hacker izinto ezihluke ngokuphelele, futhi uma sicabanga ukuthi isigebengu sizinikele ekutholeni ubuthakathaka, kusukela ngalowo mzuzu kuqhubeke saqala kabi ... ukuthi njengephuzu lokuqala, elesibili liyafana, ngoba kunamakhono amaningi kakhulu abantu, ukuthi yize amagama abo engabhaliwe ngezinhlamvu zegolide komagazini abahamba phambili emhlabeni (lokho kungaba ngumbuzo nje we-ego) banikela ingxenye enkulu yosuku lwabo kumaphrojekthi walolu hlobo. Futhi bakwenza ngoba bayakujabulela ukukwenza, ngaphandle kwalokho bengingeke ngithole isizathu esanele sokubabona besebenza ngeSonto ebusuku, noma bathathe imizuzu embalwa ngosuku ngemuva kosuku olude lokusebenza ...
Futhi ekugcineni, futhi lokhu futhi kungumbono womuntu uqobo, ekugcineni kuzoba ngefa olishiya emhlabeni "ngokutholakele" kwakho ... yebo, izingqondo eziningi ezinhle zenza isoftware ukuthi iyini, abanye bayaziwa, abanye abayona kakhulu, kepha ukuthi kuya ngalowo nalowo ... Ngabelane ngemibhalo nekhodi ezindaweni eziningi, futhi ngamangala ukubona ukuthi inamaphutha amangaki, nokuthi mangaki amathuba okuthuthukisa ukusebenza kahle, usayizi, ukukhiqiza, ukuqonda, njll. ... futhi mhlawumbe lokho kuyinto engiyithanda kimi ukukwenza futhi okwami ​​kakhulu, kepha njengoba nje kukhona abantu abakwenzela i-ego nemali kuphela, kukhona abanye abakwenzayo ngoba simane siyakuthanda 🙂 kodwa kuzoba lula kakhulu kimi ukukhokhisa ngakunye kwalokhu okuthunyelwe, lapho ngokuqinisekile angisho lutho olusha, kepha ngibonile abantu abakhokhisa imali ethe xaxa ngokuqukethwe okulula kakhulu kunalokho engingabelana ngakho kule migqa.
URicardo Rios kusho
Ngokugqamile !!! Ngihlala ngikulandela… ungami phezulu !!!
Phendula uRicardo Rios
Ngiyabonga kakhulu uRicardo 🙂 ungikhuthaza ukuthi ngiqhubeke nokwabelana noma nini lapho ngikwazi can Ngiyabingelela
Ngokwe-Thesis kaZuse-Fredkin, "indawo yonke iyi-automaton yeselula" okusho ukuthi, i-Universal Turing Machine, ngoba kuyo kwenziwa izinto ezilingana ne-Universal Turing Machine (ezifana nemishini yedijithali ehlelwe - amakhompyutha). Ngamanye amagama, cishe, indawo yonke iyakwazi ukulingisa noma yimuphi umshini futhi lokho kuyenza ibe ngumshini omkhulu. Noma kunjalo. Uma usosayensi noma unjiniyela enza noma ethola imisebenzi emisha noma izixazululo endaweni yonke, futhi ngokubheka lokho ukukhuluma ngokuhlanganisa, lokhu kuyalingana (noma ngaphezulu kepha asikwazi lokho) kuMshini Wokulola Womhlaba Wonke: onjiniyela, ososayensi, njll. Ingabe bangabaduni?
Sawubona Maka 🙂 ngoba umdlalo wempilo uyisihloko esithakazelisa ngokwedlulele, ngibe nethuba lokufunda okuncane ngawo futhi ngasikhathi sinye lapho ngiyihlelile ukuze ngibone ukuthi ikhula kanjani ebhodini elincane lamaphikseli angamakhulu ambalwa. Kepha ake sifike esihlokweni, umehluko omkhulu phakathi kwe-automaton yeselula nekhompyutha ejwayelekile ukuthi i-automaton yeselula ichaze futhi yanquma imithetho, le yethulwe ngendlela elula kulolu hlelo, kepha ikhombisa iqiniso elikhulu kakhulu futhi eliyinkimbinkimbi.
Kuyafaneleka ukusho ukuthi noma ososayensi noma onjiniyela abenzi imithetho yemvelo (izimiso ezizolawula i-automata yeselula) ngoba lokhu kuyingxube yezinto ezibonakalayo nezinye izinto (ezibaluleke kakhulu) ezingabonakali. Ukuthola (ngomqondo wokwembula) umthetho omusha endaweni yonke kuyisenzo esincomekayo, futhi lokho ngokwezinga elithile kusho ukuthi uyakwazi ukubona lokho abanye abangakuboni, njengoba siphawulile kumongo wombhalo, kepha umehluko omncane futhi ocashile ongasiza ukucacisa amagama. Abaduni 'badala' ngomqondo wokuthi bakwazi ukukhiqiza imithetho emisha yezamakhompiyutha, ngokuya ngemigomo yezibalo eyaziwayo. Ososayensi "bathola" lezi zimiso zezibalo / zomzimba / njll.
Ukwenza le mihume emincane singabona ukuthi ngomqondo ojulile wale ndaba, bobabili bazobhekwa njengabaduni ngomqondo wangempela wegama 🙂 ngoba babona izinto abanye abazithatha kalula, bese bethola izinto ezibalekela umbono ojwayelekile .
Isihloko esithakazelisa kakhulu 🙂 mhlawumbe ungabhala okuncane ngakho, noma lokho kuphunyula ezweni leLinux kancane ukuze uye kancanyana kwi-theoretical Physics neMathematics 🙂 Ukubingelela nokubonga ngokwabelana
(14-6) x3 = 24? Kwakunjalo?
U-14 akabalwa - kufanele babe izinombolo eziyi-1,3,4 kanye no-6 🙂 okungu-1 x 4 - 6 + 3, kepha hhayi u-63/14 noma into enjalo. Uma ufuna impendulo, ngazise 🙂 kepha ngizoshiya ithuba lokuqhubeka ngizame
UCesar Rada kusho
Umphumela ongaba khona
Phendula kuCesar Rada
Kungithathe izinsuku ezi-3 kepha nayi:
Mngani, incwadi oyincomile ingesiNgisi, akunjalo?
Ngayifunda ngesiNgisi, kepha angikwazi ukukutshela uma ihunyushelwe olimini lwesiSpanish kwenye indawo, sikufisela inhlanhla ngalokho, Sanibonani
01000011 01011001 01000010 01000101 kusho
Phendula ku-01000011 01011001 01000010 01000101
21 + 4 ngu 25 😛
Ukungena okuhle kakhulu, kepha nginephutha, igama elithi hacker likhubazekile ngokuhamba kwesikhathi ngabezindaba elibadweba ngokuthi "libi"; Ngamanye amagama, bangabantu abanelukuluku abanolwazi olujulile ngezihloko ezithile; Ngandlela-thile ngikuhlobanisa neqiniso lokuthi abaduni bayalingana nesigqoko esimhlophe nomqaphi isigqoko esimnyama. 🙂
I-Inboxer: Iklayenti elihle le-Google Inbox le-Linux